विश्व बैंकका आधारमा विश्वकै धनी देश
२०७५ पौष २७ शुक्रबार १८:२८:००
विश्वमा सबैभन्दा धनी देश कुन होला ? तपाईसँग यस प्रश्नको सिधा उत्तर हुन्छ, जुन देशसँग धेरै पैसा छ । त्यो देश नै सबैभन्दा धनी देश हो । तर, यस प्रश्नको उत्तर दिन त्यति सजिलो छैन ।
यसरी सबैभन्दा धनी देशको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा बाटो अपनाउने गरिन्छ । त्यो हो त्यस देशको जिडिपी कति छ ? जिडिपी भनेको त्यस देशको घरेलु उत्पादन भन्ने हुन्छ । जसमा कुनै देशले एक वर्षमा कति सामान वा सेवा उत्पादन गर्‍यो भन्ने हुन्छ । आकारका रुपमा हेर्दा विश्व बैंकले अमेरिका वा चीन धेरै अर्थव्यवस्था भएको देश मानिन्छ ।
तर, देशमा उत्पादन भएको सामान वा सेवा (जिडिपी)लाई सोही देशको जनसंख्याले भाग गर्दा आउने हिसाबका आधारमा धनी देश मानिन्छ । विश्व बैंकले जारी गरेको जिडिपीका आधारमा सबैभन्दा धनी यी रहेका छन् ।
विश्वको १० धनी देश प्रतिव्यक्ति आय (हजार डलरमा)
संयुक्त अरब ६७.१३३
विश्वमा सबै धनी देश मात्रै हुँदैन । धेरै देश अति गरिब पनि रहेका छन् । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार विश्वमा सबैभन्दा गरिब देश दक्षिण अफ्रिका रहेको छ । यसपछि हैँटी र होण्डुरस रहेका छन् । एजेन्सीकाे सहयाेगमा